နယူးစက်ဘီးနှင့် Sakarya နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲအတွက် Walking Paths အဘို့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
[19 / 09 / 2019] တူရကီနှင့်အတူနှစျစဉျတစ်တန်ချိန်သန်းအတွက်မီးရထားကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးပို့ဆောင်ရေးပစ်မှတ်အီရန်အကြား	06 တူရကီ
[19 / 09 / 2019] TCDD စာနယ်ဇင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအကြံပေးKekeç, အငြိမ်းစား	06 တူရကီ
[19 / 09 / 2019] Corlu ရထားဘေးအန္တရာယ်ခံရသူတစ်ခုတည်းတောင်းဆိုမှုကိုခြေတုလက်တုလက်Aktürk	59 Corlu
[19 / 09 / 2019] Corlu ရထားပျက်စီးမှုတုံ့ပြန်မှု Aaile ထံမှ TCDD!	59 Corlu
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaနယူးစက်ဘီးနှင့် Sakarya အတွက် Walking Paths မှနှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
အသစ်ကစက်ဘီး sakaryada ပြန်သန်းခေါင်စာရင်းအပေါ်လမ်းခရီးလမ်းလျှောက်
ကမ်းခြေ 1 ရောက်ရှိဖို့ရေကန် Sapanca သစ်ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းကနေဆိုင်ကယ် Sunflower ချိုင့်တိုးတက်စေရန်အလို့ငှာစက်ဘီးနဲ့စက်ဘီးယဉ်ကျေးမှု၏အသုံးပြုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်မွို့၌ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ သူကစင်မြင့်၏အဆုံးချဉ်းကပ်။ အလင်းစနစ်များပြီးနောက်အဖြစ်စက်ဘီးနှင့်နေကြာချိုင့်လမ်းဆုံများ၏အထက်တစျပိုငျးကိုအတွက်လမ်းကြောင်းများစက်ဘီးလမ်းကြောင်းလမ်းလျှောက်နွေရာသီကတ္တရာအလုပ်အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအပေါ်ကတ္တရာအလုပ်အချိန်တိုအတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်, ကလိုင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရေးဆွဲခံရဖို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
"စက်ဘီး Friendly စီးတီး: ဦးစီးဌာနသည်အောက်ပါကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး၏ဘာသာရပ်အပေါ်သမ္မတကနေကြေငြာချက်မှာတော့ Sakarya အဆိုပါရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီကျနော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လက်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့သစ်ကိုစက်ဘီးလမ်းကြောင်းမှဆောင်ခဲ့ရမည်။ ဒါဟာ Sunflower ချိုင့်စက်ဘီးအသစ်ကစက်ဘီးစီးခြင်း၏ 1 နှင့်လမ်းလျှောက်လမ်းကြောင်းကနေရေကန် Sapanca ၏ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နွေရာသီနေကြာစက်ဘီးချိုင့်ဝှမ်းလမ်းဆုံနှင့်အတူခြေလှမ်းများ၏အဆုံးချဉ်းကပ်။ ကတ္တရာအသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွင်အလုပ်လုပ်လာတယ်။ အဆိုပါကတ္တရာလမ်းပြီးစီးပြီးနောက်အချိန်တိုအတွင်းအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့ကဆွဲလိုင်းသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါတို့မွို့မှကံကောင်းပါစေ။ "
Cark Creek အဘိဓါန် Edge စက်ဘီးနှင့်လမ်းလျှောက် Path ကိုတွေ့ဆုံ 18 / 03 / 2019 အလုပ်အတွက်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းကာလကိုဖုံးအုပ်ထားMithatpaşa Wagon နှင့်အတူနေကြာချိုင့်ဆိုင်ကယ် Park ကစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကိုအားဖြင့်ပထမနေရာအတွက်နေဆဲဖြစ်သည်။ Karamehmetoğlu, "ဒီစီမံကိန်းအတွက် Cark Creek အဘိဓါန်အတူအနားအသစ်တစ်ခုလူနေမှုအာကာသသို့ပြောင်းကြွယ်ဝစေပါလိမ့်မယ်။ မျှော်လင့်ကျနော်တို့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာပြီးသွားအားဖြင့်ပထမနေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားများကိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတင်ပြသွားမှာပါ "ဟုသူကပြောသည်။ အဆိုပါမြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့် Sunflower ချိုင့်စက်ဘီးကနေရေကန် Sapanca ၏ကမ်းခြေရောက်ရှိဖို့သစ်ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်း၏ပထမအဆင့်တွင် Sakarya တဲ့ Metropolitan အလုပ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာရောက်နေပါတယ်။ နွေရာသီ Sunflower ချိုင့်လမ်းဆုံအဆိုပါ 10 ကီလိုမီတာစက်ဘီးလမ်းကြောင်းကသူတို့မြေပြင်တိုးတက်အောင်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်တိုးချဲ့ဖို့ရာကနေ။ အလုပ်နှင့်လျှပ်စစ်မီးထမ်းဘိုးကိုထိန်းချုပ်ရန် ...
Sakarya အတွက်အသစ်ကစက်ဘီးလမ်းမကြီးအချိန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးစင်ပေါ်မှာများအတွက်တင်ဒါ 12 / 12 / 2018 နေကြာချိုင့်စက်ဘီးစီးခြင်းဖြင့် Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရေကန် Sapanca ၏ကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိကနေပန်းခြံအသစ်များလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းကိုစီမံကိန်းကိုMithatpaşa Wagon ကီလိုမီတာသောအဘို့ကို 10 အဆင်သင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 13 နုမထွက်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဥက္ကဋ္ဌ Recep Karamehmetoğluထိန်းချုပ်ရေးဌာန, နေကြာဆိုင်ကယ်ချိုင့်အတွက် Sapanca ရေကန်ရောက်ရှိ မှစ. , စက်ဘီးလမ်းကြောင်းကို၏ပထမအဆင့်အဘို့အသစ်ကိုလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် 13 ကြာသပတေးနေ့ဒီဇင်ဘာလသူတို့နူးညံ့သွားလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ နေကြာချိုင့်ပန်းခြံMithatpaşa Wagon အကြားဧရိယာများပါဝင်သည်အတူယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုမျှဝေပေးသောနိုင်ငံတော်သမ္မတToçoğlu, စီမံကိန်း၏ပထမအဆင့်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ 11.30 စီမံကိန်းတွင်အဆိုပါတင်ဒါနာရီမြို့တော်မြူနီစီပယ် ...
နယူး coil, Cetinkaya, Bağıştaş၏Kemaliyeçalt, Ilic ဘူတာပြီးတော့ဘူတာလမ်းမကြီးလုပ်ခြင်း၏ Paths Walking တစ်ခဲ့ကြောင်းအဖြစ် 14 / 05 / 2015 နယူး coil, Cetinkaya, Bağıştaş၏Kemaliyeçalt, Ilic ဘူတာနှင့်ဘူတာလမ်းများအဆိုပါတော့ဘဲရွရွပြေး Paths ပြုသောအမှုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အဖြစ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 50294 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Muhsin Yazicioglu Boulevard NO:258080 Sivas / Sivas ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3462217000 - 3462231332 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https : 2-နူးညံ့ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် //ekap.kik.gov.tr/ekap/ တစ်ဘာသာရပ်) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်: အ ECAP အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ဘိုရွန်၏ကွန်ကရစ်နှင့်ကျောက် 12946 မက်ထရစ်တန်ချိန် xnumxmxnumx parketaşကွန်ကရစ်များနှင့်တင်သော ...
စမတ်စက်ဘီးကာလ Sakarya စတင် 18 / 12 / 2018 ပိုပြီးဘဝတွေကိုတစ်လေ့လာမှုအသစ်မှစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးစရိတ်မြှင့်တင်ရန် Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်။ အဆိုပါမြို့အောင်နိုင်သူ pistil 15 အမျိုးမျိုးသောစက်ဘီးဘူတာမှရှင်းပြတဲ့အချက်တည်စေမည် "ဟုအဆိုပါဘူတာရုံကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ 100 စက်ဘီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေငှားရမ်းစက်ဘီးစက်ဘီးစီးပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုကောင်းရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ကိုယ်စားပေါ်မှာပိုပြီးဘဝတွေကိုတာဖြစ်ပါတယ်အသစ်တစ်ခုကိုစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစစ်ဆင်ရေးမြှင့်တင်ရန်။ စက်ဘီးမျှဝေခြင်းစနစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနကိုသမ္မတ Fatih pistil သူထွက်သယ်ဆောင်မှုအနုဖော်ပြခေါင်းစဉ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြို့သူမြို့သားအချို့အချက်များမှာစက်ဘီးဘူတာ၏နိုင်ငံသားများအတူတကွဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုသူကဆိုသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြငါတို့မွို့ထဲမှာစက်ဘီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏မြှင့်တင်ရေးကိုယ်စားတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖြစ်စက်ဘီးအသိအမြင် Fatih pistil, "။ ...
Sakaryada နယူးစက်ဘီးနှင့်လမ်းလျှောက် Paths
Sakaryada နယူးဆိုင်ကယ် Paths
Cark Creek အဘိဓါန် Edge စက်ဘီးနှင့်လမ်းလျှောက် Path ကိုတွေ့ဆုံ
နယူး coil, Cetinkaya, Bağıştaş၏Kemaliyeçalt, Ilic ဘူတာပြီးတော့ဘူတာလမ်းမကြီးလုပ်ခြင်း၏ Paths Walking တစ်ခဲ့ကြောင်းအဖြစ်
စမတ်စက်ဘီးကာလ Sakarya စတင်
တူရကီ6၏သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ်။ Sakarya အတွက်ဇာတ်စင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ:4မီတာလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကွန်ကရစ်အိပ်ပျော်အတူ Paths Walking အားဖြင့် 21145 Piece ဘူတာ, ဘူတာလမ်းမကြီး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမျိုးမျိုးသောဒေသများရှိအသုံးပြုနိုင်စွမ်း applications များလူကူးအဆိုပါကန်ထရိုက်တာအလုပ်ပြီးပြီ walkways ဖုံးလွှမ်း
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (330) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)